Nezvedu - Zhejiang Feihu Nyowani Energy Technology Co, Ltd.
Zhejiang Feihu Nyowani Energy Technology Co, Ltd. inyanzvi yekugadzira uye yekuendesa kunze iyo inosanganisa dhizaini, R&D, kugadzirwa uye kutengesa kwezvitsva lithiamu maturusi. Feihu Technology ine zvirimwa zvemazuva ano, yekutanga-kirasi kugadzirwa uye yekuyedza michina, iyo inovhara nzvimbo inosvika 30,000 mativi metres, nzvimbo yekuvaka ye20,000 mativi emamita. Parizvino, pane anodarika mazana mana evashandi, anosanganisira epamusoro matarenda ehunyanzvi, sangano rine simba uye timu yekutengesa
Zvigadzirwa zvedu zvinofukidza 12 / 16.8v / 21V magetsi ekudhiraivha, 21V yekukanganisa wrench, 21V scissor, Mini gadheni yekucheka, yakakwira yekumanikidza yekuchenesa pfuti uye zvimwe zvigadzirwa zvitsva. Zvigadzirwa edu vakapfuura CE & gs chitupa kare, uye Feihu Technology akapfuurawo ISO9001: 2015 yepamusoro utariri hurongwa advertising. Kubva pakuongororwa kwezvinhu zvakasvibirira uye zvikamu kusvika pakuongorora kwekuchengetedza zvigadzirwa zvisati zvasiya fekitori, maitiro ese aya anonyatso kudzorwa nenyanzvi dzehunyanzvi kuti vaone yekutanga-kirasi chigadzirwa chemhando
Fekitori yedu iri muJinhua guta, padyo neangbo uye shanghai chiteshi, kutakurika kwekufambisa kwekutakura nekushanyira. Sales network inovhara nyika dzinopfuura makumi matanhatu nenharaunda pasirese, senge Southeast Asia, South Asia, Middle East uye zvimwe. Kuvimbiswa kwemhando yepamusoro uye kugutsikana kwevatengi ndizvo zvakakosha zve Feihu Technology kambani.
Isu tine akateedzana emhando yeanodzora maitiro manejimendi uye yemakamuri ekuraira, anopfuura makumi maviri maseti ekuyedza michina kuve nechokwadi kuti zvigadzirwa zvese zvine mhando yakanaka isati yatumirwa. Feihu Technology yakavakirwa pakutenda kwakanaka, kugoverwa kwakaringana kwenhumbi, yakakwana mushure mekutengesa sevhisi, uye yakahwina kurumbidzwa kwakakwirira kubva kune vatengesi kwese kwese
Tinokukoka nemwoyo wose kuti utishanyire uye woongorora chigadzirwa kugadzirwa, kudzora mhando uye kugona kwefekitori.